Dan Moss bụ Idahoan, Site na Site na - Potatoes News
Dan Moss bụ Idahoan, site na site na
Amụrụ Dan Moss na Idaho. O toro na Idaho. Ọ bidobeghị ọrụ ugbo ya na Idaho. Ma zuru ike, Dan Moss bụ Idahoan, site na site na.
A mụrụ Moss ma zụlite na ugbo ezinụlọ dị na mgbago ugwu Utah. Mana ka okpuru-ala jiri nwayọ nwayọ gaba na Wasatch Range, ọ bịara doo anya na continuingga n'ihu ịkọ ugbo na mpaghara ga-esiwanye ike. Ya mere na 1980, Moss na nwunye ya Jann chịkọtara ezinaụlọ ahụ wee gawa n'ebe ugwu na I-84, bụ ebe ala na-eme nri, nke pere mpe nke ala Anwansi Anwansi.
Ngagharị ahụ, iji tinye ya nwayọ, akwụgo ụgwọ. Taa, Moss Farms gụnyere mpaghara njikwa ise na mpaghara atọ: abụọ na mpaghara Burley-Rupert n'akụkụ ọ bụla nke Osimiri Snake; ugbo ala ọdịda anyanwụ na Bliss; ugbo ọwụwa anyanwụ na Osimiri Raft; na ubi mkpụrụ na Sublett. Na 2007, ha zụtara ụlọ ọrụ nduku Arrowhead, nke a na-esite na poteto ha niile na tebụl (ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mkpụkọ mkpụmkpụ nke Mosses) juru na ya. Ndị ọzọ - ewepu mkpụrụ - ka enyere nkwekọrịta McCain, Simplot na Gem State Processing.
Nwa Dan na Jann bụ Ryan bụ onye na-arụ ọrụ ugbo kwa ụbọchị, mana Dan na-arụsi ọrụ ike. Ọ ka ga-enwe mmekọrịta chiri anya na ugbo na ịkwakọba ihe, yana ọ dị omimi n'inyere aka kwalite ụlọ ọrụ nduku na akara Idaho site na itinye aka na ụlọ ọrụ azụmaahịa ụlọ ọrụ. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi oche oche nke nduku USA na 2018 wee bụrụ onye na-akwado ụlọ ọrụ na nsonaazụ ya na arụmọrụ ya.
Ugbo ala Dan Moss na Idaho
"Echere m na otu nnukwu ihe kpatara ugbo na-adịgide site na ntụgharị ọgbọ," Moss na-ekwu, "bụ ezigbo nganga na ịhụnanya nke ala ahụ. Ozugbo i zitara aka gị n'ala unyi ahụ wee pụta, ma ọ bụ lelee gwongworo na-ejupụta na nkeji, o siri ike imeju nke ahụ. ”
Moses ahụla ọtụtụ ọganihu n'ọtụtụ afọ - na ugbo ha, na ezinụlọ ha, na ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị na ndị Mosis emeela ihe karịrị oke oke ha iji hụ na ọganihu ahụ gafere. Ha ga-ekwu eziokwu.
Moss hụrụ ihe ya na ezinụlọ ya wuru n’ebe ndịda Idaho. N'ehihie Septemba anwụ na-acha na ugbo Raft, ọ na-anya isi na-anya isi ka gwongworo ndị na-ebu poteto na-esi ebe a na-ebufe ya. Nwa nwoke nke okenye Ryan, bụ Deven, alọghachila n'ugbo ahụ oge niile ma na-arụsi ọrụ ike iji hụ na igwe ọ bụla na-agba ọsọ nke ọma ka poteto a gwuru ọhụrụ na-agafe ọtụtụ ndị njem.
Ihe dị ka narị mita ise site na ya, nwanne Deven Austin na-arụ ọrụ ubi. Nwanne nwoke nke ọdụdụ Alex, onye okenye na Declo High, ka nọ n'ụlọ akwụkwọ, mana ị nwere ike ịkọ na ọ ga-aga n'ụzọ a ozugbo mgbịrịgba ikpeazụ ahụ dara. Site na ahihia nke uzuzu, ị nwere ike ịhụ na ihu nke ezinụlọ Moss ka ha si nwee obi ụtọ, ọ bụghị naanị iwe ihe nduku, kama ime ya ọnụ.
"Echere m na otu nnukwu ihe kpatara ugbo na-adịgide site na ntụgharị ọgbọ," Moss na-ekwu, "bụ ezigbo nganga na ịhụnanya nke ala ahụ. Ozugbo ị kwaturu aka gị na unyi ma spuds ndị ahụ pụta, ma ọ bụ lelee ụgbọ ala shuga na-ejupụta na nkeji, o siri ike iru nke ahụ.
"Can nwere ike leba anya n'ubi gị ma snow dị na ya, na ihe ọzọ ị ga-amata bụ na ị na-akọ ala ma na-akụ mkpụrụ gị," ka ọ gara n'ihu. “Osisi ndị ahụ bụ ụmụ ọhụrụ gị n’oge ọkọchị; ị na-elekọta ha ma na-ele ha ka ha na-eto. Mgbe owuwe ihe ubi na-abịa. Oge a na-akwụghachi ụgwọ maka uru n'ihi na ị bido n'enweghị ihe ọ bụla, ị ga-ahụ ka ihe na-aga n'ihu. ”
50 maka 50: Dan Moss
Isiokwu a gosiri na June 2021 nke Nduku.
/ ụlọ ọrụ-akụkọ ihe mere eme /
Tags: Akụkọ Ụlọ ọrụugbondị na-eto etoIdahougbo nduku
Chips ndị kacha mma mere ka FAM Centris belata Technology